AbaseNtshonalanga: bafanela imibhalo yesandla engama-700 yaseTimbuktu: ngekhulu le-000, idolobha laseTimbuktu, eNtshonalanga Afrika, lalithathwa njengelicebile kunabo bonke emhlabeni, likhulu izikhathi ezingamashumi ayisihlanu kunedolobha laseParis, ibinabahlali abangaphezu kwe-115
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-February 6, 2020 12: 12 Awekho amazwana
Maye, namuhla iTimbuktu iyisigamu sabantu, iphindwe kabili izikhathi ezingama-2500 XNUMX kuneParis futhi ayifani nedolobha lanamuhla. Ezimweni ezingenakuchazeka ezingenakuphikiswa, izinxibi kanye ...	Funda kabanzi
Ngabe i-oligarchy yaseFrance ingasindisa i-Afrika? Ababili baseFrance ababoshwe phakathi kwabashokobezi abangamaSulumane eMali, iFrance iyingozi e-Afrika "Kuphela ama-morons acabanga ukuthi i-oligarchy yaseFrance ise-Afrika ukusindisa abamnyama" (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Januwari 20, 2020 07: 07 Awekho amazwana
Kufanele ube yisiphukuphuku ukucabanga ukuthi iFrance ngumngane we-Afrika. Ama-morons kuphela acabanga ukuthi use-Afrika ukulwa nabashokobezi. Izinduna kuphela ecabanga ukuthi ...	Funda kabanzi
Ungenzi iphutha ngabangane noma izitha: bonke labo olwa nabo akuzona izitha zakho, ngokufanayo bonke labo obasizayo abawona abangane bakho "Kufanele ube yisiwula ukucabanga ukuthi iFrance yiyona umngani we-Afrika ”… (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Januwari 20, 2020 04: 14 Awekho amazwana
Ngakho-ke, kufanele ube nokuqonda ukuthi ungenzi amaphutha nabangane noma nezitha: nesitha, akufanele unenkontileka ngisho nomfelandawonye onamandla kunayo. "L ...	Funda kabanzi
Imibono yama-Dogons: sasilapho kahle, ngaphambi kokubulawa kwethu, abakhohlisi bezithunzi, abacabanga ukuthi bangodokotela
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: I-December 1, 2019 12: 12 Awekho amazwana
USirius kanye nezinja - imfihlakalo yeplanethi "Ema-Dogons, uNommo ushiye izambulo ezintathu ngesenzo": Igama lokuqala kwakuyigama elimanzi. Elesibili isenzo esikhanyiselayo ...	Funda kabanzi
Ngokusho kukaJacques Attali: Abansundu / ama-Afrika asungule ikhompyutha eyidijithali kudala ingatholakali ukuthi yi "Fractals, theory yezibalo yase-Afrika - amakhompyutha kanye nohlelo lwe-kanambambili" Indalo emnyama / yase-Afrika ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Septemba 8, 2019 00: 00 Awekho amazwana
Okokuqala, yini esikhuluma ngayo lapho sisho ngokweqile? Isibalo esikhubazekile noma i-fractal yisigaxa esingajwayelekile noma esihlukanisiwe esidalwe ngokulandela imithetho ethile ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: April 25, 2019 00: 00 Awekho amazwana